अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन: अफवाहले हाम्रा मनोवल गिराउन सक्दैन | समाचार | अरनिको न्युज
अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन: अफवाहले हाम्रा मनोवल गिराउन सक्दैन
नानीराम नेपाल Sunday 17-May-2020 11:15 PM
न्युज अरनिकाे / जुगल सिन्धुपाल्चाेक
अाइतवार दिनभरी जसाे जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हाेमनारायण श्रेष्ठकाे माेबाइलकाे घण्टी बजिरह्याे । उनकाे मात्र हाेइन उनकाे कार्यलय र कर्मचारीका फाेन पनि उति नै व्यस्त भए । सन्दर्भ थियाे उनकाे र्यापिड टेस्टमा संकास्पद देखिए पछि पिसिअार परीक्षणका लागि स्वाव संकलन गरी टेकु पठाइएकाे थियाे ।
कतिपयले यसैलाइ लिएर काेराेना संक्रमण पुस्टी भए जसरी सामाजिक संजालमा प्रचार गरे । यसले जुगलमा एकाएक त्रासकाे वातावरण वन्याे ।
राती ९ :४५ मा पिसिअार परीक्षणकाे नतिजा नेगेटिभ अाए पछि सुखद खवर शेयर गरिहालुम जस्तो लाग्यो भन्दै उनले फेसबुकमा लामाे स्टाटस हालेका छन् ।
श्रेष्ठ लेख्छन्, 'संक्रमण क्षेत्रमा ट्राभल हिस्ट्रि भएका व्यक्तिको (भरलाग्दो प्रविधि नभएता पनि) कमसेकम RDT परीक्षण गर्ने जुगलको निर्णय छ । राम्चेकी महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भए पछि बैशाख २० गते जुगल स्थायी ठेगाना भइ हाल बाह्रविसे तातोपानी क्षेत्रमा वस्ने व्यक्तिहरुलाई राहत वितरणमा म र लालबहादुर श्रेष्ठ गएका थियौं । हाम्रो RDT परीक्षण गर्दा एउटा Clear Negative र एउटा (मेराेमा) संकास्पद थाेरै डट (हुन त नेगेटिभ नै थियाे) भए पछि मेरो स्वाव संकलन गरी हिजो बेलुका नै टेकु पठाइयो । भर्खरै रिपोर्ट आयो । PCR परीक्षण नतिजा नेगेटिभ आएको छ । अर्थात कोरोना संक्रमण नभएको पुष्टि भएको छ' ।
मेरो यो नतिजासंगै म संगै फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने सहकर्मीहरुको चिन्ताको सवाल पनि अलिक कम भएको छ । यस अर्थमा खुशी पनि लागेको छ । उनले भनेका छन् ।
दिनभर फैलिएकाे हल्लाले टर्चर भएकाे भन्दै अनि थप्छन् 'यस बीचमा आफुलाई संचारकर्मी भन्न रुचाउने केही व्यक्तिहरुको अराजक फेसबुक स्टाटस र अफवाहले धेरैमा भ्रम सिर्जना गर्यो । मेरो परिवार, आफन्तजन तथा शुभचिन्तकहरुमा यसले ठुलो टर्चर भयो । कतिपय व्यक्तिहरु वास्तविकता बुज्न भन्दा पनि अफवाहकै पछि लागेर म, मैले नेत्रत्व गर्ने संस्था र यो विपत्तीमा म संगै अहोरात्र खटिने सहकर्मी माथि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष जाइलागे । कोरोना ल्याउने यिनै हुन भने जसरी प्रचार समेत गरिए । यसबाट हामीले भोगेको Stigma (लाञ्छना) र यसले पुरयाएको क्षती त फिर्ता हुदैन तर हामी एक रत्ती विचलित भएका भने छैनौं । किनकी हामी ठुलै विपत्तीका लागि समेत मानसिक रुपमा तयार भएर बसेका छौं । म र मेरो टीम आफनो ज्यानको संगसंगै सिगो गाउँपालिकाको जनताको स्वास्थ्य प्रति संवेदनशिल छ । हामी हाम्रो मुन्टो मात्र जोगाउने अभियानमा छैनौं' । अग्रपंक्तिमा काम गर्ने जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरुको मनोवल कमजोर हुने कुनै पनि गतिविधि नगरिदिनु हुन समेत उनले सबैमा अपिल गरेका छन् ।
राष्टकाे चाैथाे अङ्गले अनुमानित र प्रतिशोध्धत्मक समचार नलेखाेस । कम्तीमा ABC विष्लेषणा गरेराम्राे ।
संसदमा पेस भयो संविधान संशोधन विधेयक
एमसीसी परियोजनाको टुंगो संसदबाटै लगाउने नेकपाको निर्णय
के छ बजेटमा महत्वपूर्ण बुँदाहरु ?
नयाँ नक्सा संयुक्त राष्ट्रसंघमा पठाईने
कमरेड ! आज बोक्नेले भोलि तपाईलाई पछार्छन अनि के गर्नुहुन्छ ?